Big nokuhomba, kwilizwekazi lase-Afrika isoloko ibandakanywa zonke iimovie, imidlalo kunye neencwadi. Bakhupha e phezu locale ezingaqhelekanga kunye nomdla kakhulu umhlaba baye nale ndawo zasendle kwaye otherworldly, kutshanje IGT likhuphe umdlalo slot online ezinomxholo enzima Afrika. Wawubizwa The Life Wild,i kwiindawo zokubeka akukho dipozithi online esibonisa icala ingane yaye kungakholeleki eAfrika arhola abahloli yi enqanaweni-umthwalo ngexesha eminyaka edlulileyo. Kodwa ngaba lo mdlalo bafanelwe ukuba siwela kwaye zihlolwe? Makhe sibone ukuba.
I-Wild Life ephosise ingane
Oku kwiindawo zokubeka akukho dipozithi online iza ekwazi ezintlanu ngeengcamba ezintathu. Kwathi kanye, paylines ishumi ezemidlalo esisigxina. Nangona ngokwenene kanye kunye amathuba winile eyenziwayo ukusuka ekhohlo ukuya ekunene and vice versa, oku kuthetha ukuba phana paylines amabini. Le ekwazi ibekwe ngaphakathi isakhelo uqalo wayifulela imidiliya nezinambuzane. Ekubeni Amathafa abaNtsundu ngexesha kwelanga okuhle ngenxa nezinto spice phezulu.
Isimboli ephambili kule kwiindawo zokubeka online akukho game idipozithi zizinto unsurprisingly lokuzingela, indlulamthi, elephant, Jwarha no ingwe. Isimboli ixabiso elingaphantsi ezi K, Q, J no A. Kodwa abanye isimbo funky Afrika ukufakwa kwabo.
Uphawu zasendle ingonyama ukugquma bekuya kuba ugula ukucetyiswa ukuba bahlangane kwindlela engasese ebusuku. Olu phawu kungabonwa ekwazi ezimbini ukuya kwezine. Xa kuyanceda ifomu ngokuphumelela combos, ayanda ukuba kwazo balizalise lonke esondweni. Ukongezelela, iya indawo zonke ezinye iimpawu ukugcina siwachithe. Ngenxa siwachithe ukuba imephu ubuchule kwelizwekazi leAfrika.
Kubharhula Me A Ibhonasi
Iibhonasi kule kwiindawo zokubeka online akukho game idipozithi kunokuba kwaphela. Kodwa ke nangoku eyonwabisayo kwaye kwanele ngaphezulu. Chief phakathi iimpawu bonus the mode spin ezamahala. Makhe sibone oko konke malunga.
aziyeki ezamahala- i spin osemqoka free iye yasebenza kule kwiindawo zokubeka online akukho game idipozithi xa phezulu Afrika imiqondiso yemephu usichithachithe bathathu wayizuza afike naphi na kwi reel. Uchithachitha ezintathu sase ilingana ijikelezisa ezilishumi free. Ezine ilingana ezilishumi ijikelezisa simahla kwaye ezintlanu ithetha ukuba ufumana ndisikelelwe amabini ijikelezisa free.
Kule mo na iisimboli agcwayele ngaphezulu kufuneka ufake kuyo i imbonakalo, osebenzisa ezingaphezulu ezimbini zezakho ukuba zidlale. Yaye ukuba nawuphi na ekwazi Tyhila endle ngoxa ikwimo spin ezamahala, oko kuya kuhlala khona oko kude ijikelezisa zakho free ngeenxa babe yinto engekhoyo.
Le kwiindawo zokubeka eyoyikekayo ngokupheleleyo online akukho game yesibambiso kuluncedo ngokwenene bazingenele. Ngoxa kunokuba lula kakhulu ukuba ezinye, kodwa nangoku kubalulekile uhlola. Yezemidlalo i RTP of ukusuka 92.16% kwaye 96.16% umdlalo ngokuqinisekileyo uhlawula ngaphandle. Kwaye uvuselele kanye.